About isu - Shijiazhuang negora Tools Co., Ltd
Shijiazhuang negora Tools Co., Ltd iri mu midziyo kugadzira chawo muna Shijiazhuang. Sezvo rakavakwa 2003, negora Tools yave pakuramba kwacho kukura uye anogadzira zvinhu nedhaimani Ezvemutauro. The chigadzirwa siyana rinotaura nedhaimani dzeraundi dzawaona mashizha, nokuikuya mavhiri, nokuikuya shangu, pakuonekwa Mapedhi, makirisito chibooreso matomu etc. negora Tools ane rokutengesa samambure akafukidza 30 mumatunhu ari China, uye kunze kwenyika kuNorth America, Europe, Oceania uye dzimwe nharaunda. Kunze yayo muchiso, negora Tools pamwe vatengi vazhinji OEM kana OEM bhizimisi. Pashure pemakore rokutsanya kukura, negora Tools zvino mumwe kutungamirira Chinese Vagadziri nedhaimani maturusi uye akunda kupupurirwa zvakanaka yepamusoro zvinhu uye kunyatsoomerera unhu kuzvidzora.
Negora Tools ndokwenguva nzvimbo 20,000 mativi metres, pamwe nenyanzvi R & D, QC, Production, uye Sales chikwata nezvimwewo, vashandi zvachose pamusoro 150. The workshop ane hwakavimbika otomatiki kana semiautomatic kugadzirwa uye nekuongororwa zvivako, kusanganisira sintering mutsetse, brazing mutsetse, Laser nomoto mutsetse , noukukutu analyzer, arambe achirema analyzer, nepakati tester, kuvhenekwa munda etc.
gore rimwe nerimwe negora Tools invests 10% yayo wepagore kwemari muna R & D. The R & D chikwata ine neavhareji ruzivo vanopfuura 10 makore, uye anokwanisa kupindura nokukurumidza kuti customized zvikumbiro. The R & D mainjiniya vanoziva siyana kushanda ezvinhu wedhaimondi maturusi, izvo vakwanise kupa vatengi pamwe nenyanzvi zvekushandisa nhungamiro, magadzirirwo zano uye kushanda kurovedzwa.
The kambani ane yokuisvonaka kudzora hurongwa, kusanganisira IQC, IPQC, FQC, pashure-sale basa nezvimwewo, achivimbisa kuti vose vatengi kugamuchira chete yepamusoro zvigadzirwa. With kunyatsoteerera gwaro kudzorwa, asi zvakavanzika unyanzvi magwaro uye mutengi ruzivo vari unovimbisa.
Negora Tools, wako akavimbika nokutengesa nedhaimani Ezvemutauro. Welcome to fekitari yedu, uye kutarisira pamwe nemi!